नेप्सेमा सूचीकृत २६ बैंक वित्त कम्पनीको लाभांश घोषणाः सबैभन्दा बढि स्वाभिमानले ३४ प्रतिशत प्रतिफल दिने, अन्य कुनको कति ? « Nepal Bahas
प्रकाशित मिति : २२ आश्विन २०७८, शुक्रबार १६:३७
२२ असोज, काठमाडौं । हालसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत २५ बैंक वित्त कम्पनीहरुले लाभांश घोषणा गरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मुनाफाबाट २५ बैंक वित्त कम्पनीले लाभांश घोषणा गरेका हुन् ।
स्वाभिमान लघुवित्तले सबैन्दा धेरै ३४ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ । दोस्रो स्थानमा रहेको सबैको लघुवित्तले ३२.६८ प्रतिशत, तेस्रो ग्लोबल आईएमई लघुवित्तले २८ प्रतिशत, चौथोमा लक्ष्मी लघुवित्तले २७ दशमलव ३७ प्रतिशत र पाँचौ स्थानमा हिमालयन बैंकले लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो । २४ कम्पनीले १० प्रतिशतभन्दा धेरै लाभांश घोषणा गरेका छन् ।
यतिबेला सात वाणिज्य बैक, दुई विकास बैंक र १६ लघुवित्त कम्पनीले लाभांश घोषणा गरेका छन् । हाल लाभांश घोषणा गरेका बैंक वित्त कम्पनीले के कति लाभांश दिदैछन् सोही चर्चा गर्ने छौ ।
हिमालयन बैंकले २१ दशमलव ३६ प्रतिशत बोनश शेयर र ४ दशमलव ६४ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल २६ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ ।
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक १० प्रतिशत बोनस र ३ दशमलव ०६ प्रतिशत नगद (करसहित)_ गरी कूल १३ दशमलव ०६ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले १६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। जसमध्ये बैंकले ११.२४ प्रतिशत बोनस शेयर र बोनस शेयर तथा नगद लाभांशको कर प्रयोजनको लागि समेत गरी ४.७६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको हो ।
कुमारी बैंकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट ६ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनसहित दुई दशमलव ६७ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल ८ दशमलव ६७ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकले लाभांश घोषणा गरेको छ। बैंकको असोज ६ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले शेयरधनीहरुलाइ चुक्ता पुँजीको १३.३० प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनको लागि ०।७० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
सानिमा बैंकले कुल १७.८९४७ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ ।उक्त लाभांशमध्ये बोनस शेयरमा लाग्ने कर समेत गरी नगद लाभांश ०.८९४७ प्रतिशत र बोनस शेयर १७ प्रतिशत दिने भएको छ ।
सिटिजन्स बैंकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट चुक्ता पूँजीको १२.९१३ प्रतिशत बोनस शेयर र ३.८९ प्रतिशत नगद गरी १६ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ ।
हेरौं कुन वाणिज्य बैंकले कति दिदैछन् लाभांश
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले गत आर्थिक वर्षको सञ्चित मुनाफाबाट शेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशत बोनस शेयर र सोको कर प्रयोजनार्थ ०.५२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात सो लाभांश वितरण गरिनेछ।
कामना सेवा विकास बैंकले हालको लचुक्ता पूँजीको १८.५० प्रतिशत बोनश शेयर र कर प्रयोजनको लागि ०.९७ प्रतिशत नगद गरी कुल १९.४७ प्रतिशत लाभाँश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो।
यी दुई वटै बैंकको प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि शेयरधनीहरुले पाउनेछन्।
१६ लघुवित्तको लाभांश घोषणा, कुनको कति ?
गत वर्षको मुनाफाबाट शेयरधनीलाई लाभांश घोषणा गर्नेमा सबैंको लघुवित्त, ग्लोबल आइएमई लघुवित्त, मेरो माइक्रोफाइनान्स, एनआईसी एशिया लघुवित्त, स्वाभिमान लघुवित्त, आरएसडीसी लघुवित्त, गुराँस लघुवित्त, सिभिल लघुवित्त, लक्ष्मी लघुवित्त, आशा लघुवित्त, साधना लघुवित्त, स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था, मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था, डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय सस्था र फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
यी १५ कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी स्वाभिमानले ३४ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले ३२.३० प्रतिशत बोनस शेयर र १ दशमलव ७० प्रतिशत नगद लाभांश कर प्रयोजनको लागि गरेर कुल ३४ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
स्वालम्बन लघुवित्तले २५ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ । उल्लेखित चार्टमा स्वालम्बनको विवरण उल्लेख छैन् ।